Amasu okutshala imali ukuze uphume uphila ngo-2019 | Ezezimali Zomnotho
Akuyona imfihlo ukuthi kulo nyaka u-2019 uzoba nzima kakhulu kuzo zonke izimakethe zezezimali, kokubili ukulingana nemali engenayo engaguquki. Lokhu kukhonjiswa yiseluleko sabahlaziyi bezezimali ababaluleke kakhulu abaxwayisa ngokuthi lo nyaka ungadala izimanga eziningi ezingezinhle kubatshali zimali abancane nabaphakathi. Ngalo mqondo, inkomba ekhethiwe yemakethe yamasheya yaseSpain, i-Ibex 35, iqala kusuka kwelinye lamazinga aphansi kakhulu eminyakeni yamuva. Ngokuqondile, kusuka kufayela le- Amaphuzu we-8.500 futhi ngemuva kokwehla kwenani lonyaka we-2018 okungekho ngaphansi kuka-15%, ngokuhambisana nezinye izimakethe zomhlaba wonke.
Ngalo mqondo, amathemba okutshala imali ezimakethe zamasheya awathembisi nakancane. Hhayi kancane. Ngaphandle kokuthi umnyango wokuhlaziya iBankinter ubheka ukuthi "siyaqhubeka nokucabanga ukuthi akunangqondo ukuthi izimakethe zamasheya zivalwe ngokulahleka lapho imiphumela yebhizinisi ikhula ngamadijithi aphindwe kabili futhi nomnotho womhlaba uhamba kancane kepha awubhekisi kunoma ikuphi ukwehla komnotho." Kuyiphuzu lokuba nethemba elingabiwa ngamanye ama-ejenti wezezimali empeleni amabi kakhulu ku- ukuxilongwa benza izimakethe zokulingana kulo nyaka.
Omunye wale mibono uqhamuka kubahlaziyi bezimali abazimele abaxwayisa ukuthi ezinyangeni ezizayo i-Ibex 35 ungavakashela amazinga ngamaphuzu angama-6.500 XNUMX. Lokhu kusebenza kusho ukuthi izimali zikazwelonke zizokwehla ngamanani aphindwe kabili nokuthi ukulahleka kuzoba kukhulu kakhulu kubatshalizimali abanezikhundla ezivulekile kulezi zimpahla zezimali. I-panorama lapho okwehlukana khona kucace bha phakathi kwabalamuli abahlukahlukene bezezimali. Ngakho-ke, isilinganiso esikhulu abatshalizimali abancane nabaphakathi abangasisebenzisa ukuhlakanipha futhi ngaphezu kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe.
1 Amasu ku-2019: amathuba
3 Bheka amasheya amakhulu
4 Faka isicelo sokuvinjelwa
5 Ungathatheki yiziphindiseli
6 Suka kumanani aphikisana kakhulu
Amasu ku-2019: amathuba
Impela, akukho ukushoda kwamazwi anegunya agcizelela ukuthi umnotho uzoba kahle kahle kulo nyaka. Lapho amanani aphansi kakhulu, futhi inzuzo ibonakala ikhula cishe i-6% ne-8%. Njengomphumela walo mkhuba obonakalayo ezimakethe zezimali, kubonakala kunengqondo ukuthi imakethe yamasheya isebenza kahle. Abanye abahlaziyi bezezimali, njengalabo be-Bankinter, baveza ukuthi lo msebenzi omusha wemakethe yamasheya kufanele ube muhle kuzintshisekelo zabatshalizimali, ngenzuzo engaphezu kuka-10%.
Ngakolunye uhlangothi, into eyodwa ibonakala icace kubo bonke, futhi lokho ukuthi kulokhu abatshalizimali kumele bachaze isu labo lokubhekana nokwehla noma ngisho nokwehla kwamandla omnotho okumenyezelwa ngabahlaziyi. Kuwukuhlakanipha okukhulu ukuqapha ukugwema konke okwenzekile enkingeni yezomnotho edlule. Lapho ingxenye enhle yabatshalizimali ishiye ama-euro amaningi endleleni. Kulesi senzakalo, umbono wabahlaziyi bezimakethe awuvumelani ngazwi linye, ngakho-ke ukuchazwa komzila wokutshala imali ngeke kube lula kulo nyaka. Izici ezibaluleke njenge impi yezohwebo phakathi kwe-US neChina, Ukuqokwa kweBrexit noma okhethweni olufana nolwaseYurophu ngoMeyi kungaba nomthelela omkhulu ekuthuthukiseni izimakethe zamasheya kulo nyaka.
Njengoba sibhekene nalesi simo ngokujwayelekile, amasu okuqala wokutshala imali okufanele awenze afaka phakathi ukwakha imisebenzi yokuthenga neyokuthengisa esikhathini esifushane kakhulu. Kuyindlela enhle yokuvikela nokugcina imali yethu lapho kunezimo eziguquguqukayo ezimakethe zamazwe ngamazwe zokulingana. Ngalo mqondo, isu elihle kakhulu kulokhu kusebenza lisuselwa ekusebenzeni ngezibambiso ezine- umfutho onamandla inohlonze impela. Ukunyakaza kungenziwa ezinsukwini ezimbalwa ezibonwe. Ukuze ungabambeki ezikhundleni zokuphepha ezihlaziyiweyo.
Kunoma yimuphi unyaka, lona akuwona unyaka wokuthi ungenza kanjani imisebenzi eqinile kakhulu. Ngaphandle kokuthi bazoba nazo isikhathi esiningi sempilo yethu, njengoba kwenza abazali bethu noma ogogo nomkhulu wethu kwezinye izikhathi. Lapho bekuyimpahla yezezimali ebiyingxenye yamafa. Yebo, lesi akusona isikhathi esifanelekile kakhulu sokuhlala kulezi zinyathelo ngoba zingabiza kakhulu. Ikakhulukazi uma kunezidingo zokwehluleka kwemali kwesinye isikhathi noma kwenye.
Bheka amasheya amakhulu
Lesi futhi akusona isikhathi sokuzama amasheya amancane kakhulu. Phakathi kwezinye izizathu zokubaluleka okukhethekile, ngoba yilezo ezethula i- simo esishubile ephakeme ekuguqukeni kwamanani abo. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe kwezokuphepha uqobo. Ngakho-ke kuncamela ukukhomba amanani amakhulu wezinkomba zokulingana. Akukhona ukuthi bazokwenza kangcono, kepha ukuthi bazonikeza ukuphepha okukhulu kubatshali zimali abancane nabaphakathi.
Ngakolunye uhlangothi, ngama-caps amakhulu kuzohlala kulula kuwe ukuthola i- ukuvuselelwa ngamanani abo. Okuthile okubiza kakhulu ezinkampanini ezincane neziphakathi nendawo ngoba kwezinye izimo azifinyeleli kulawo mazinga kakhulu. Eminyakeni embalwa edlule kunezibonelo ezingenakubalwa ezigqamisa lo mkhuba okhetheke kakhulu. Ngakho-ke lesi ngesinye isizathu sokukhetha amasheya aholayo ekuhwebeni kwamasheya kuzwelonke noma emhlabeni jikelele. Hhayi ize, uzohlala uvikeleka kakhulu futhi ngaphezu kwakho konke ngezikhathi zokungazinzi okukhulu emakethe yamasheya.
Faka isicelo sokuvinjelwa
Ukubeka i-oda lakho lokuthenga igunya elibizwa ngokuthi i-stop loss ngeke lisabaluleka onyakeni njengobunzima njengoba kulindeleke ukuthi kube lo-2019. isebenzisa ukuvikela ukuvikela izintshisekelo zakho njengomtshalizimali omncane naphakathi. Ngesizathu esilula sokuchaza futhi lokho okuqukethe wena kuzoba nokulahlekelwa kuphela ongakucabanga kuphela ngokuya ngezidingo zakho ezithile. Ngale ndlela, uzokugwema ukuba ne-induction enamandla esitatimendeni sakho semali engenayo.
Ukuze usebenzise lo myalo wokukhawulelwa kokulahleka kuzodingeka kuphela ukuthi uveze ukuthi kufinyelela kuliphi izinga lentengo bambelela ezimpophomeni ezimakethe zokulingana. Kuyindlela ephumelela kakhulu ezokusiza ukuthi ulondoloze imali yakho oyitshalile ngaphezu kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe. Ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa yinoma yimuphi umtshalizimali omncane naphakathi futhi ngaphandle kokuba nezindleko zomnotho noma ngohlobo lwamakhomishini. Kuvulekele zonke izinhlobo zamasu emkhakheni wokutshalwa kwezimali kwesitoko.
Kulo nyaka, isibalo esifanelekile njengokubuyiswa kabusha emakethe yamasheya sizoba yingozi ikakhulukazi. Ngoba ungawela kulezi zingibe ezinikezwa izimakethe zezimali futhi uthenge ongazisola ngakho ngemuva kwezikhathi ezimbalwa zokuhweba. Ngoba umehluko phakathi kwe- intengo ecashuniwe nentengo yokuthenga kungaba kude kakhulu. Lesi ngesinye sezingozi ezisobala ozodalulwa kuzo kulo nyaka onzima ukwenza ukonga okunenzuzo nalesi sigaba sezimpahla zezimali.
Ngakolunye uhlangothi, awukwazi ukukhohlwa ukuthi ukubuyela emuva ku- Izinqubo ze-bearish kumele zisetshenziselwe okuphambene. Lokho wukuthi, ukukhanyisa iphothifoliyo kancane kancane. Akukho okunye ngoba ungazithola uyizimo ezingafuneki kakhulu futhi ezingaholela enhlokodolobha yakho ukuwa ngokuyingozi kakhulu. Lokhu yinto okufanele uyijwayele ezinyangeni ezizayo. Ngoba akukho kungabaza ukuthi kuzoba ngesinye sezilingo ezinkulu kunazo zonke okufanele ungene kuzo ezimakethe zezimali.
Suka kumanani aphikisana kakhulu
Kunoma ikuphi, futhi uma nganoma ngasiphi isizathu ufuna ukwenza imisebenzi emakethe yamasheya kulo nyaka, akufanele ukhethe ukuphepha okuyinkimbinkimbi kakhulu ukuthi kusebenze. Akumangalisi ukuthi unqunyelwe ukuthuthukisa uchungechunge lwemisebenzi ongazisola ngayo ngesikhathi esifushane. Ukukunikeza umbono osondele kakhulu walesi sici, akukho okungcono kunokubeka njengesibonelo okwenzekile ngonyaka odlule nge Dia. Isabelo sisuke kuma-euro ama-4 saya ezingeni lama-euro angama-0,30. Awudingi ukuphinda lokhu kusebenza.
Yebo, kulo nyaka ngeke kumangaze kakhulu ukuthi lolu hlobo lwezenzo kwamanye amasheya luyaphindwa. Futhi-ke, kufanele unake kakhulu izimpawu zobuthakathaka kulezi zinkampani ezibhalwe ezimakethe zezimali. Ngaphandle kokucatshangelwa kwayo kwezobuchwepheshe futhi mhlawumbe ngisho nasendaweni yokubuka eyisisekelo. Akumangalisi ukuthi lo kuzoba unyaka ogcwele ukwethuka okukhulu. Futhi yize kuzoba namathuba ebhizinisi, akulona iqiniso elincane ukuthi kuzoba nokuphahlazeka okuningi emakethe yamasheya, ezweni lonke nangaphandle kwemingcele yethu.
Kunoma ikuphi, futhi njengesifinyezo, ukuqonda kufanele kube yiyona nto ejwayelekile kuzo zonke izenzo zakho ezimakethe zezezimali. Lapho ngokungangabazeki kuzofika izikhathi eziningi ezinzima kubatshalizimali abancane nabaphakathi. Lapho ukhiye kuzoba ukwenza amaphutha ambalwa ngangokunokwenzeka futhi kulokhu kufanele uvikele imisebenzi ethile ezimakethe zezimali. Ngemuva kwakho konke, yilokhu okulindele ezinyangeni ezizayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Amasu okutshala imali ukuze aphume ephila ngonyaka we-2019